Ceni: “Misy fiantraikany ratsy ny fanakatonana ny lisi-pifidianana” | NewsMada
Ceni: “Misy fiantraikany ratsy ny fanakatonana ny lisi-pifidianana”
Nitondra fanazavana. Namaly ny ahiahin’ny maro momba ny fifidianana sy ny lisi-pifidianana ny eo anivon’ny Ceni. Eo koa ny molba ny ho fiatrehana ny voka-pifidianana .
“Roa lehibe ny olana manodidina ny lisi-pifidianana: voalohany, ny mpifidy no manao izay hahatsara ny lisi-pifidinana. Tsy maintsy manamarina ny anarany eny amin’ny fokontany ny mpifidy, izay vao mandroso ny fahadiovan’ny lisi-pifidianana.”
Izay no anisan’ny nambaran’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Nanisana, afakomaly, ny amin’ny ahiahy tsy ihavanana manodidina ny fifidianana. Miverimberina matetika amin’ny fitarainana voarain’ny Ceni ny momba ny lisi-pifidianana sy ny fitantanana ny voka-pifidianana.
Olana faharoa ny tsy fahazoana mikitika intsony ny lisi-pifidianana, nanomboka tamin’ny 15 mey lasa teo. Ny fiantraikan’izay: mbola ao anatin’ny lisitra ny olona efa maty, tsy ovaina ny mpifindra monina, tsy tafiditra ao anaty lisitra intsony izay vao feno taona…
Momba ny fitantanana ny voka-pifidianana, eo an-dalam-pieritreretana lalina ny Ceni eo amin’ny fampangaraharana ny kirakira rehetra amin’izany. Tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin’ny firaisamonina sivily amin’ny fanaraha-maso ny trangan-javatra rehetra eny ifotony izany. Efa misy ny fifanakalozan-kevitra amin’ny mpamatsy vola hamatsiana ny fomba hanarahana sy hanamarinana ny fahamarinan’ny voka-pifidianana, araka ny fanazavany.
Tanjona ny fifidianana tsara omana sy tsara karakara
“Ny tanjona tiantsika rehetra hotratrarina: fifidianana tsara omana, tsara karakara, mangarahara ary eken’ny rehetra”, hoy izy. Mba ho tena ny hevitry ny vahoaka maro anisa tokoa no mahalany ny filohan’ny Repoblika. Amin’izay fotoana izay, ho mafy orina ireo andrimpanjakana rehetra, hanjaka ny filaminana sy ny fandrosoana maharitra ho an’i Madagasikara.
Mifototra amin’ny teboka telo lehibe no hanatrarantsika izany tanjona izany: ny fisokafan’ny Ceni amin’ireo mpiara-miombon’antoka rehetra, ny fiantohana ny fangaraharana amin’izay atao rehetra, ny fampanjakana ny fahamarinana eo amin’ny fitantanana ny fifidianana.
Ho afaka amin’izany rehetra izany ve ny ahiahy amin’ny fikarakarana sy ny fikirakiran’ny Ceni ny fifidianana?